Ny Fanamby amin’ny fampielezan-kevitra manaraka izao | Mon Gasikara à moi : politique et développement
← Nombrilisme et décadence intellectuelle
Fotoanan’ny fahaizana manao safidy →
Ny Fanamby amin’ny fampielezan-kevitra manaraka izao
Publié le 14 octobre 2017 par andrianjorar
Ho avy amin’ny erintaona ny fifidianana raha tsy misy ny sampona. Dia ho tonga indray izany ny fampielezan-kevitra sy ny fotoanan’ny toky fitaky ny mpanao politika : omeko 4L daholo ianareo, telo volana dia voavaha ny olan’ny Jirama, tsy hisy intsony ny kolikoly, manginy fotsiny ny lainga sy fampiorohoroana vahoaka….Tsy nisy na iray aza tamin’ireo voafidy ka tsy nitantara valamaty tamintsika mpifidy. Dia na nisy aza nefa izany ka mitsikera ianao dia ireo mpilelaka indray no avo feo sy mateti-piavy : tsisy toy Ranona, Izatsy no tena nahavita be, Izaroa no tena nampandroso sns.
Aleo aloha apetraka mialoha mikasika ireny filoha taloha sy ankehitriny : raha nisy NA IRAY AZA filoha nahavita ny asany ara-dalàna dia tsy ho toy izao ny fahantrantsika. Zava-misy tsy azo lavina izany na iodi-kavia na iodi-kavanana. Izany hoe TSY NISY NANAO NY ASANY ARA-DALANA ireo rehetra misy miandrandra sy mileladelaka ireo na iray aza. Sahiko mihitsy aza no milaza fa azo lazaina ho mpandainga tsy vaky atatra sy mpamadika ny teny nomeny daholo ireo rehetra teo sy eo ireo. Ary tsy sanatria anao fambara loza fa 90% ny mety aha toy izany izay manaraka eo, raha tsy misy fanovàna ataontsika mikasika ity sata repoblikanina tsy mandeha amin’izay laoniny ity. (Iny mbola anaovana lahatsoratra iray amin’ny manaraka).
Tsy sanatria koa nefa voahozona isika ka tsy hafa-manoatra. Ary misy tena misy tokoa ny azo atao zao dia zao. Ireto ary ny fanovàna tsotra sy aingana azo angatahina :
Ny nampianarin’ny frantsay ny mpanao politika gasy dia hoe « les promesses politiques n’engagent que ceux qui les écoutent » na raha atao dika malalaka dia hoe « ny adalan’izay te hino mpanao politika sy ny fampanantenàna paokatiny ». Nefa ny soatoavina malagasy dia tena mifanohitra tanteraka amin’izany!! Ny fanajàna ny teny nomena no maha-olombanona ny olona iray. Ka rehefa tsy mahay manaja tena ny mpanao poltika dia tokony ho tanana amin’ny teny nomeny. Ny fampanantenana rehetra mandritra ny fampielezan-kevitra izany dia tsy maintsy asiana fe-potoana ny fanatanterahana azy. Ka raha vao tsy mahavita ny filoha voafidy dia miala tsy misy fanazavàna akory!
Efa re ombieny ombieny ny resaka « observatoire des dépenses publiques » angatahin’ny Fiarahamonim-pirenena anaraha-maso ny fandaniana ataon’ny fanjakàna. Izy ireo izany dia tokony hafaka mijery ny asan’ny mpanaramaso ny fiasan’ny fanjakàna (les inspections de l’Etat) sy ny cour des comptes. Fa mila alàna avy eo ambany fahefan’ny FRM ireo asa fanaraha-maso ireo ary homena fahefàna manasazy izy ireo raha tsy manara-dalàna ny mpitondra. Tsy mila mitory any amin’ny fitsaràna intsony izany ireo mpanara-maso raha misy fahadisoana fa ny cour des comptes no homena fahefàna anasazy ny tsy mety.
Alàna daholo ireo resaka fiarovana (immunité) ny manampahefàna rehetra tsy ankanavaka ka azo tsaraina toy ny olon-tsotra na ny FRM na ny mpiara-miasa aminy na izay rehetra voafidy na amin’ny ambaratonga inona na inona.
Raha ireo hevitra telo ireo fotsiny no azontsika avadika lalàna velona dia, na iza na iza lany eo, dia efa tsy maintsy miatsara ny fitondràna politika eto amintsika raha tsy izany dia voadaka vody izay tsy mahomby ialay toy ny tsy teo.
Tsy ny olomboafidy velively na ny mpitondra eo an-toerana no andeha hametraka izany lalàna izany fa anjarantsika vahoaka no manery ireo mpiasantsika ireo ametraka izany lalàna izany.
Galerie | Cet article, publié dans Politique, est tagué Fanarahamaso mahefa, FRM azo roahina, Teny nomena, Tsy maty manonta. Ajoutez ce permalien à vos favoris.